Raiso valiny ny fanontanianao anio, matory anio hariva. Hanampy anao izahay izao. - NJ & NY Real Estate, Probate, Foreclosure Defense and Bankruptcy Attorney
Misoratra anarana sy araho
Antsoy amin'izao fotoana izao ho an'ny Sady stratégaly maimaimpoana(844) 533-3367
NJ & NY Real Estate, Probate, Defense Foreclosure ary Mpisolovava ana-bola
Mpisolovava tany amin'ny tanànan'ny Jersey
Ny fijerena ny fananana
Angamba, Wills, Trust and Estate Litigation
Raiso valiny ny fanontanianao anio, matory anio hariva. Hanampy anao izahay izao.
Ajanony ny varotra Sheriff
Namidy noho ny Fivarotana Fivarotana fohy
Fivarotana trano sy trano ara-barotra
Azo inoana, Wills, Trust, ary Litigation
Fanavotana Lien Hetra
Toko 13 Bankruptcy
Toko 7 Bankruptcy
Toko 11 Bankruptcy
Izahay dia manantona ny safidinao rehetra hanampiana anao amin'ny famolavolana sy hamaritana ny fomba tsara indrindra ataonao. Izahay dia mpiasan'ny lalàna iray feno amin'ny mpisolovava miorina ao Jersey City, NJ; Hackensack, NJ; Freehold, NJ; ary Brooklyn, NY. izay manana mpisolovava marobe izay natokana rehetra hanampy anao.
GIMME NY FIVORIANA FAHASALESANA IN-DEPTH ATAIM-PIVAVAHANA miaraka amin'ny mpisolovava anio!
Hanao zavatra 3 isika amin'ity fihaonana ity:
Hihaino anao izahay.
Handeha amin'ny safidinao daholo izahay.
Izahay dia hanomana fanoratana an-tsoratra momba ny raharahao azonao alaina amin'ny mpisolovava iray hafa raha nifidy ny tsy hiasa aminay ianao.
Mitadiava fanampiana izao
100% Voarindra antoka
Mifandraisa amin'ny New York na New Jersey Foreclosure Defense Attorney androany.
Ny biraon'ny lalàna momba an'i Patel, Soltis & Cardenas dia fantsom-pahalalana tsara indrindra any New York sy New Jersey, izay mifantoka amin'ny fanodikodinana, fanovana fampindramam-bola, banky, probable ary famarotana trano any New Jersey. Raha mieritreritra ianao fa mila manana Mpisolovava NJ Foreclosure or NY Foreclosure Attorney atombohy amin'ny firesahana amin'ny FREE ho an'ny anio. Tetikasa miorina amin'ny fianakaviana izahay ary mifantoka amin'ny fanompoana ny isam-batan'olona sy ny orinasan'izy ireo. Na mila fiarovan-tena mialoha ao New York na New Jersey na Will ianao mianakavy. Manana ny fahalalana ara-dalàna sy ny matihanina ho anao izahay. Ny dingana voalohany hamahana ny olana rehetra dia ny fahafantarana fa manana safidy ianao. Miresaha amin'ny mpisolovava anio momba ny safidinao rehetra.
TOKO FOTSO TOKO - TALY ANY ANTOLO ANTANY !!
Mampiasà mpisolovava fiarovana miaro amin'ny fiarovana ny zonao.
Raha te hisorohana ny fametahana mialoha na hahazoana fanovana findramam-bola ianao, dia tokony hiresaka amin'ny mpisolovava fiarovana fiarovana Foreclosure ankehitriny ianao handinika ireo safidy rehetra hamonjy ny tranonao. Ny dingana rehetra ataonao anio dia afaka mahazo fotoana bebe kokoa amin'ny ho avy. Ny fananganana mpisolovava mahalala ny lalàna foreclosre no dingana voalohany amin'ny fitazonana ny tranonao.
Toko 7 Bankruptcy: Saika eo no ho eo ny fidirana amin'ny fampidinana trosa.
Ny torohevitra ara-dalàna dia omena matetika ho takalo amin'ny onitra ara-bola na zavatra azo tsapain-tanana hafa
Amin'ny maha mpisolovava an'i New Jersey, hanampy anao izahay raha mila mandresy Probate Litigation na manomana ny sitraponao mba hahafahan'ny fianakavianao hisoroka ny fitsidihana amin'ny ho avy.
Ny fanovana ny fampindramam-bola dia manova ny fehezanteny efa misy. Tsy famatsiam-bola intsony izany….
Ny fifampidinihana fohy eo amin'ny fifampiraharahana dia fifanakalozan-dresaka eo amin'ny olona roa na maromaro natao hanatrarana a…
Ny fanjakam-bolan'ny 13 dia hijanona ny tsy fahitana…
Ny fifandanjalanja dia mety atao an-tsitrapo na tsy maintsy atao na dia eo aza ny fanamelohana mandalo
MISAOTRA ATTORNEY REHETRA ATAO NY TOKONY ATAO HOE MAIMAIMPOANA
Mifandraisa aminay ary hanao zavatra 3 ho anao izahay:
1. Ho hita eo daholo ireo olana ara-dalàna atrehanao.
Ny dingana voalohany ataontsika dia ny fihainoana ny zava-misy manodidina ny zava-misy atrehinao. Te-hahafantatra ny zava-nitranga rehetra izahay, ary izay tianao hitranga amin'ny manaraka. Tianay aminao ny milaza aminay amin'ny teninao manokana ny zava-nitranga, ary inona no tanjona farany ho anao amin'ny toe-javatra misy anao. Imbetsaka isika manana mpanjifa izay trosa, miatrika olana izay tadiavon'izy ireo hialana nefa mila mamaha. Ny tolo-kevitray dia miankina amin'ny andrana efa nataony taloha sy izay tiany atao amin'ny ho avy. Ao anatin'ny toe-javatra mitaky fahitana, misy vahaolana marobe toa ny fandrindrana mialoha ao amin'ny fanjakana na fitsarana federaly, manofa ny fananana, mivarotra ilay trano amidy fohy na fivarotana mahazatra, fatiantoka (na ara-dalàna ny 7, toko 13 na izy roa aza raha ny zava-misy mitaky izany.) Raha tsy takatry ny sainao ny tantaranao manontolo, dia tsy afaka mankany amin'ny ampahany izay hiresahantsika safidy isika.
2. Izahay dia handeha hamaky ireo Defence sy Safidy azonao.
Ny toe-javatra rehetra dia tsy manam-paharoa ary tsy ny vahaolana rehetra no miasa ho an'ny rehetra. Ny toko faha-7 fatiantoka dia mety ho an'ny fianakaviana iray, saingy ho anao, mety nahatonga ny Toko 7 Trustee maniry hivarotra ny tranonao izy. Raha tsy mandinika ireo antsipiriany manodidina ny toe-javatra iainanao ianao dia tsy afaka manolotra ireo safidy mety mifanaraka aminao. Raha efa nanova ny trosa ianao taloha, dia hamerina ny fanovana nataonao taloha izahay ary hahita ny antony handavana azy io, ary afaka manolotra soso-kevitra momba ny fomba hahazoana izany fankatoavana izany isika. Holazainay aminao koa raha toa ka tsy azo ekena ny vola miditra aminao na mamolavola drafitra hampitombo ny fidiram-bolanao. Raha mitady ny fiarovanao ny tranonao eny amin'ny fitsarana isika, dia handalo ny fantsom-pitsarana rehetra isika mba hahitana raha misy fiarovana izay tsy azonao. Manana raharaha mahakasika ny serivisy tsy mety, fotoam-pitsarana raharaha notontosaina isika
3. Izahay dia hanomana lisitra fohy momba ny zava-misy iainanao azonao alaina amin'ny mpisolovava hafa raha toa ka tsy mendrika toa ny mpisolovava anay izahay.
Raha tsy lalao ho anao izahay amin'ny maha mpisolovava anao, dia halefanay ireo antontan-taratasy izay nomaninay nandritra ny dinidinika. Hanoratra ny zava-misy iainanao izy io. Azonao atao avy eo ny mampiasa izany raha te hanadihady mpisolovava hafa ianao raha toa ka tsy mendrika toa ny mpisolovava anao.
Tsy mandray ny raharaha rehetra atolotra anay isika. Raha tsy afaka mandresy ho anao izahay, dia holazainay aminao. Izahay dia hojerentsika ny safidinao rehetra, fa amin'ny faran'ny andro, raha tsy afaka manampy anao izahay, dia holazainay aminao.
Manana mpisolovava isika izay mifantoka amin'ny lafiny samihafa amin'ny lalàna. Manana mpisolovava fahazoan-dàlana New Jersey izahay izay mifantoka amin'ny fiarovana Foreclosure, Transaction Real Estate, Bankruptcy, Probate, ary Debt Collection / Consolidation. Manana mpisolovava fahazoan-dàlana New York izahay izay mifantoka amin'ny fiarovana Foreclosure, Transaction Real Estate, Bankruptcy, Probate, Family Law and Debt Collection / Consolidation. Rehefa mifandray aminay ianao dia mila miatrika vetivety aminao izahay mba hahazoana antoka fa mifandray amin'ny mpisolovava izay mety hanampy anao amin'ny raharahao ianao.
TOKO FOTSO TOKO - TALY ANY AN-TENY
Manana dingana dingana 3 izahay mba hahazoana antoka fa afaka manampy anao izahay, na manangana anao mba hiteny amin'ny mpisolovava hafa miaraka amin'ny lisitry ny zava-misy marina momba ny toe-javatra misy anao. Fantatsika fa mety amin'ny olona rehetra izahay, fa hanampy anao izahay mba hahafahan'ny mpisolovava manaraka hifandraisana aminao, azonao atao ny mamaly ny valiny ilainao.
100% mifantoka amin'ny trangao
Azontsika atao ny manampy anao hanomana sitrapo, miaraka amin'ny sitrapo velona / torohevitra ara-pitsaboana mandroso, na mamorona fitokisana hiarovana ny fanananao. Ny mpisolovava New Jersey Probate dia hanampy anao amin'ny maha mpanatanteraka ny
Ity kompania ity dia naorina mba hanampiana ny olona amin'ny trano fonenana. Ny mpiara-miasa rehetra dia samy mifantoka amin'ny fiarovana fiarovan-tena amin'ny New Jersey na New York. Fantatsika ny tena mety hiseho amin'ny famahana ny fandaharam-pahefana amin'ny alàlan'ny litigation, fanovana fampindramam-bola,
Ny fatiantoka, anisan'izany ny fatiantoka any New York ary ny fatiantoka New York, dia dingana vita amin'ny fitsarana federaly natao hanampiana ny mpanjifa sy ny orinasa hanala na hamerina ny trosany eo ambany fiarovana ny bankrapo. Ny lalàna federaly ao
Jereo ny serivisy rehetra
Namboarina ny fampindramam-bola
Nalefa ny trosa ara-bola
Niasa ora Pro Bono
I Peter sy Veer dia samy nahay matihanina ary haingana avy hatrany tamin'ny valin'ireo fanontaniantsika. Tsy vitan'izy ireo fotsiny ny hahazoana ny valin'ny fanontaniantsika fa ny fahalalana marina dia nomena mba handraisana fanapahan-kevitra tsaratsara kokoa. Excellent.
Jereo ny fijoroana vavolombelona rehetra
NAHOANA IANAO INDRINDRA?
Raha mitady ny ekipa mpisolovava tsara indrindra ianao izay mahatakatra faritra maro amin'ny lalàna any New Jersey, ekipa mpisolovava za-draharaha izay hitondra anao ho mety amin'ny maha client anao. Manana mpisolovava maro isika izay mampihatra lalàna mifandraika amin'ny Fananana trano, fampindram-bola, lalàna momba ny fiarovana fiarovana, famatsiana ara-bola, fomba tsara indrindra hividianana na fivarotana fananana, sitrapo sy herin'ny mpisolovava, probable & estates, familiana trosa, famindram-bola ho an'ny tena manokana, ary orinasa. Tsy niraharaha. Izahay dia hiaro ny zonao raha miasa toy ny ekipa hanome fanampiana anao izahay. Ireo mpisolovava anay dia mahatakatra ny fomba ifandraisan'ireo karazana raharaha rehetra ireo. Izahay dia hiaro ny tsiambarateloo na miantso anay an-telefaona ianao, na mitsidika anay ao amin'ny iray amin'ireo Ofisitray momba ny consultation. Tsy maninona fa misafidy ny hifandray amin'ny orinasa izahay dia hotsidihinay ny safidinao.
Izahay dia manana birao any Jersey City, NJ mifanila amin'ny Hudson County Courthouse; Hackensack, NJ manodidina ny zoro avy ao amin'ny Bergen County Courthouse; Freehold, NJ midina eny an-dalambe avy ao amin'ny Monmouth County Courthouse, Manhattan, NY misy tranonkala any Midtown New York City; ary Brooklyn, NY miampita avy ao amin'ny Courtsouse Kings County izay midina amin'ny arabe avy ao amin'ny fitsarana Bankruptcy Brooklyn hihaona amin'ny mpanjifanay. Manolotra fifanakalozan-kevitra maimaimpoana izahay amin'ny ankamaroan'ny raharaha ho an'ny raharaha rehetra any New Jersey sy New York.
Azafady mba mifandraisa aminay (844) 533-3367 na alefaso aminay any [mailaka voaaro]
Matokia ny traikefa anananay mba hanompoana ny filanao ara-dalàna sy ara-bola rehetra ao amin'ny 2018 sy mihoatra. Ny tenanay dia tapa-kevitra hanampy anao.
Veer P. Patel, Esq.New Jersey - Mitantana fiaraha-miasa
Derek (DJ) Soltis, Esq., MBA / MSMpiandraikitra ny fampiharana ara-bola - Partner
Lazaro Cardenas, Esq.Mpiasan'ny fizarana trano fonenana
Jason C. Bost, Esq. , MBANew York - Mitantana fiaraha-miasa
Hizaha ny mpikambana rehetra ao amin'ny ekipa
Vaovao farany avy amin'ny bilaogy
Ny zon'ny mpanofa trano amin'ny NJ Foreclosure taloha sy aorian'ny NJ Sheriff Sale
FAQ momba ny Kabary 13
Janoary 17, 2020
Hizaha ny bilaogy rehetra
Inona no mitranga raha avelako mpampindram-bola tsy ho tratry ny lozitako?
Fampindram-bola ve ny Pay Day?
Heverina ho fidiram-bola ve ny fiarovana sosialy?
Jereo ny FAQ rehetra
1. Ho hita eo daholo ireo olana ara-dalàna atrehanao. 2. Izahay dia handeha hamaky ireo Defence sy Safidy azonao. 3. Izahay dia hanomana lisitra fohy momba ny zava-misy iainanao azonao alaina amin'ny mpisolovava hafa raha toa ka tsy mendrika toa ny mpisolovava anay izahay.
Mifandraisa amin'izao fotoana izao ho an'ny Sady stratégaly maimaimpoana
Misoratra anarana ao amin'ny Newsletter isam-bolana
Azafady mba omeo ny adiresinao sy ny adiresy mailakao mba hisoratra anarana amin'ny mailaka isam-bolana.
Suite 307, City, NJ 07306
Any ambony rihana, Hackensack, NJ 07601
89 Market St., 4 rihana,
Marketing amin'ny ara-dalàna
Ny biraon'ny lalàna momba an'i Patel, Soltis & Cardenas dia manome ny fatiantoka, fampahafantarana sy fanovana fampindramam-bola ho an'ireo mpanjifa manerana ny faritr'i New Jersey sy New York miaraka amin'ireo birao any Jersey City, Freehold, Hackensack, Manhattan, ary Brooklyn. Adiresy ara-dalàna io tranonkala io. Ny fampahalalana amin'ity tranokala ity dia natao ho an'ny fampahalalana ankapobeny fotsiny. Tsy misy na inona na inona eto amin'ity tranokala ity izay tokony ho raisina ho torohevitra ara-dalàna ho an'ny tranga tsirairay na ny toe-javatra. Ity fampahalalana ity dia tsy natao hamoronana, ary ny fandraisana na fijerena dia tsy fifandraisan'ny mpanjifa mpisolovava. Mpisolovava izahay, fa tsy mpisolovava anay mandra-pisonia iray avy lasa mpisoratra anarana iray.
ATTORNEY FIVORIANA. Ny valin'ny lasa dia tsy manome antoka ny ho avy. Izahay dia maso ivoho fanampiana. Manampy ny olona izahay hametraka fanampiana amin'ny alàlan'ny fitsipi-bolan'ny Bankruptcy.
Copyright © 2020 nataon'i Patel & Soltis, LLC. Zo rehetra voatokana.
Antsoy ny mpitsara ankehitriny